Faallo: Xuduudaha Afrika Waa Xuduudihii Isticmaarka | Araweelo News Network
Xuduudaha Somalia, Somaliland, Jabuuti, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania ama dalkasta oo kale oo Afrikaan ah waa isku mid xagga qawaaniinta caalamka iyo sharcinimada, waxaana dhammaantood jeexay Gumaystayaashii Reer Yurub. Waxaa sidaas oo kale la mid ah xuduuudaha dalalka Carabta, Aasiya, iyo Koonfur Ameerika.
Qofkasta ama maamulkasta oo diidan xuduudaha Somaliland, qaranimadeeda, dawladnimadeeda iyo aqoonsigeeda waxaa uu diidanyahay dhammaan xuduudaha dawladaha Afrika oo ka kooban 54 dal, kuwaas oo laga wada dhaxlay Gumaystayaashii Reer Yurub. Somaliland waxay xornimada ka qaadatay Boqortooyadii Ingiriiska markii taariikhdu ahayd 26kii June ee 1960 halka Somalia xornimada ka qaadatay dawladii Talyaaniga markii taariikhdu ahayd 1dii July ee 1960. Xuduudda caalamiga ah ee u dhaxaysa Somaliland iyo Somalia waxay dhinaca Galbeedka ka martaa Garoowe iyo Boosaaso.
Xuduudaha dalalka Afrika kuma dhisna qabiil balse waxay ku dhisanyihiin dhulka. Afrika ama adduunyada kaleba kama jirto dawlad ku salaysan hal qabiil. Dalkasta oo Afrikaan ah waxaa ummaddiisu ka koobantahay qabaa’il kala duwan oo isku xuduud ah isla markaana wadaaga dawladnimada iyo qaranimada. Qabiilkasta oo Afrikaan waxaa uu kala deganyahay dhawr dal oo Afrikaan ah.
Tusaalaha soo socda ee Qabaa’ilka Afrika ayaa muujinayaa sida qabiilkasta oo Afrikaan ah u kala deganyahay dhawr dal, qaybkastana dalka ay degto la wadaagto: Calan, xuduud, qaranimo iyo dawladnimo:
1. Qabiilka Fulani: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Mali, Nigeria, Niger, Chad iyo Cameroon.
2. Qabiilka Tuareg: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Senegal, Nigeria, Mali iyo Niger.
3. Qabiilka Lunda: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Congo, Zambia iyo Angola.
4. Qabiilka Hausa: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Nigeria, Ghana, Sudan iyo Cameroon.
5. Qabiilka Yoruba: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Nigeria, Benin iyo Togo.
6. Qabiilka Maasai: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Kenya iyo Tanzania.
7. Qabiilka Afar: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Ethiopia, Eritrea iyo Djibouti
8. Qabiilka Berber: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Morroco, Tunisia, Libya iyo Algeria.
9. Qabiilka Gabooye: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Somaliland, Somalia, Ethiopia
10. Qabiilka Isaaq: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Somaliland, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti
11. Qabiilka Samaroon: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Somaliland, Ethiopia iyo Djibouti.
12. Qabiilka Hawiye: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Somalia, Kenya iyo Ethiopia.
13. Qabiilka Darood: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Somalia, Somaliland, Kenya iyo Ethiopia
14. Qabiilka Rahanwein: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Somalia, Ethiopia iyo Kenya.
15. Qabiilka Essa: Qabiilkanu waxaa uu kala deganyahay Djibouti, Ethiopia iyo Somaliland.
Nabadgelyada iyo xasiloonida Afrika waxay ku dhisantahay ixtiraamidda iyo aqoonsiga xuduudaha Afrika ee laga dhaxlay Gumaystayaashii Reer Yurub, dalkastana ku qaatay gobanimada. Afrika, Carabta, Aasiya iyo Koonfur Ameerika waxay ku kala badbaadeen kuna kala nabdgaleen aqoonsiga iyo ilaalinta xuduudihii Isticmaarka. Haddii dal Afrikaan ah uu sheegto dadka iyo dhulka ka tirsan dalkale oo Afrikan ah isaga oo ku andacoonaya inay isku qabiil ama isir yihiin, waxaa Qaaradda Afrika ka dhicilahaa dagaallo qabaa’il oo dhiig badan ku daato iyo fawdo, Qaaradana u horseedilahaa burbur guud oo aanay ka soo kabateen. Qaaradda Afrika ee aynu maanta naqaan ma jirteen.
Beesha Harti ee degta dhulka Buuhoodle, Sool iyo Sanaag Bari waxay ku yaaliin isla markaana xuduud la wadaagaan Jamhuuriyadda Somaliland, xuduudaas oo ah tii Gumaysigii Boqortooyada Ingiriiska. Waa qayb ka mid ah Somaliland oo aan marnaba ka go’ikarin lana wadaaga qaranimo iyo dawladnimo. Sidaas daraadeed, dhulka Beesha Hartiga ee ka tirsan Somaliland maaha dhul muran ka taaganyahay. Somaliland marnaba ma aqbalayso figradda ah: “Dhulka muranku ka taaganyahay ee Somaliland” sida dalkasta oo Afrikan ah aanu u aqbaleen in qayb ka tirsan dalkiisa lagu magacaabo: “Dhul muran ka taaganyahay.”
Maamulka Puntland ee Federaalka Somalia waxaa uu ku riyoonayaa inuu mideeyo Beesha Harti ee Daarood oo kala degta Somalia, Somaliland iyo Itoobiya. Qaramada Midoobay, Ururka Afrika iyo dalalka IGAD ee Afrika miyay aqbalayaan in Afrika laga dhex-abuuro dal lagu magacaabo “Fulani” iyada oo xoog lagu midaynayo Beesha Fulani ee kala degta Mali, Nigeria, Niger, Chad, iyo Cameroon ama la abuuro dal lagu magacaabo “Tuareg” iyada oo xoog lagu midaynayo Beesha Tuareg ee kala degta Senegal, Nigeria, Mali iyo Niger? Jawaabtu waa MAYA. Sidaas oo kale, Qaramada Midoobay, Ururka Afrika iyo dalalka IGAD kama aqbalayaan Maamulka Puntland ee Federaalka Somalia dabada ka riixayo inay midayso Hartiga Geeska Afrika si ay u abuurto dal lagu magacaabo “Harti”. Adduunka kama jiro dal hal qabiil ka kooban. Maamulka Puntland ee Federaalka Somalia kuma sheegankaro isirnimo ama hayb dad iyo dhul ka tirsan Somaliland.
Haddii lagu tunto xuduudaha Afrika ay ka dhaxashay isticmaarka laguna bedelo xoog waxaa Qaaradda Afrika burburindoona dagaallo qabaa’il oo dhiig badan ku daato halkaasna waxaa ku dumidoonta Qaaradda, dalkastana waxaa uu waayidoona nabadgelyada, dawladnimada, iyo qaranimada uu maanta haysto. Xuduudaha Afrika Waa Xuduudihii Isticmaarka oo jiritaankeedu ku dhisanyahay.
Hadaba, si Qaaradda Afrika looga nabadgesho kacadoon qabaa’il oo ku dayanaya Maamulka Puntland ee Federaalka Somalia, waa in Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, Ururka Afrika iyo dalalka IGAD cambaareeyaan Federaalka Somalia ee raba inuu xuduudaha Afrika xoog ku bedelo si uu qalaalase uga abuuro Qaaradda Afrika kuna khasbaa inay ka baxaan dhulka Somaliland.
Ibrahim Hassan Gaagaale